निर्वाचन बहिष्कार गरेका तिङ्लावासी भन्छन् – कर्मचारीले मात्रै नचल्ने रहेछ, निर्वाचन होस् ! - Deshko News Deshko News निर्वाचन बहिष्कार गरेका तिङ्लावासी भन्छन् – कर्मचारीले मात्रै नचल्ने रहेछ, निर्वाचन होस् ! - Deshko News
काठमाडौं ओखलढुंगा । सोलुखुम्बुको तिङ्ला गाउँ जनप्रतिनिधिविहीन छ। तर, निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा समेटेको छैन। अन्य ठाउँका रिक्त पदमा भने मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन गर्ने तयारी छ।